I-Playojo Casino yase Ningizimu Afrika- i-50 Spins yamahhala u dephozithi yakho yokuqala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-playojo casino
Isibuyekezo se-Playojo Casino
Isofthiwe:Microgaming, NetEnt, NextGen, WMS, Play n GO
Usizo: Complaints Section, Email, Live chat
Ibhonasi Lokukwamukela:50 Yemijikelezo Kwi dephozithi Yokuqala
I-Play OJO Casino iyipulatifomu esetshenziswa abaningi (white label) yemidlalo, ephethwe yi-SkillOnNet Limited. Ku-inthanethi kusukela ngo-2017, ikhasino inelayisense yemikhandlu emibili ehlonishwayo elawula i-iGaming emhlabeni, i-UK Gambling Commission ne-Malta Gaming. Ukulawula kuqinisekisa ukugembula okulungile nokunomkhawulo futhi i-Play OJO Casino iyisikhungo esingajwayelekile sokukhuthaza ukugembula okunomkhawulo ngebhanela eliphezulu kwesokudla ekhasini lasekhaya kanye namaphromoshini. Ikhasino ibuye yethule abasebenzi bayo abayinhloko, okungenye into eyivelakancane emhlabeni wemidlalo eku-inthanethi.
Ukusekela isisho sayo esithi ‘ikhasino elunge kunazo zonke’, i-Play OJO Casino inikeza amaphromoshini akhangayo angenazo izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali. Abadlali bangakhipha noma yikuphi abakuwine ngephromoshini ngesikhathi sabo ngaphandle kwezinkinga zokuqedela izidingo zokudlala, into esingavamile ukuyibona. Uma lokho bekunganele, ikhasino inesici se-OJO Plus esibuyisela imali ethile (ibhonasi kakheshi obuyiselwayo) kumalungu kuwo wonke amadiphozithi. Futhi ngaphezu kwakho konke, i-Play OJO Casino inamaphesenti akhokha kakhulu embonini, angaqinisekiswa ngabazimele.
Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Play OJO Casino
Amalungu amasha avula i-akhawunti e-Play OJO Casino amukelwa ngama-spin amahhala angu-50 e-Book of Dead slot kudiphozithi yabo yokuqala. Ama-spin amahhala afakwa ngokuzenzakalela ku-akhawunti yomdlali ngokushesha lapho umdlali ediphozitha. Okuwinwa ngama-spin amahhala kufakwa ngqo kuma-akhawunti amalungu njengoba Ibhonasi Yokukwamukela ayinazo izidingo zokubheja.
Kunesitatimende esisodwa sokuzikhipha ecaleni: Umdlalo kufanele utholakala esifundeni sakho. Idiphozithi yokuqala kufanele ibe ngu-R 200 noma phezulu bese inani le-spin lizobalwa ngo-R 2. Ibhonasi Yokukwamukela ingaphansi kwezinqubomgomo ezijwayelekile zokudlala, ezingafundwa ngamalungu amasha ngaphambi kokuthatha ama-spin amahhala.
Reels Spin Off Tournament Reels Spin Off Tournament I-Play OJO Casino iqhuba umqhudelwano wama-slot wansuku zonke, lapho amalungu angawina khona ama-spin amahhala angu-1000s ku-slot yosuku. Lapho abadlali bewina kaningi, bathola amaphoyinti amaningi ku-leaderboard. Izindawo ezintathu eziphezulu ku-leaderboard ngabanqobe ama-spin-offs. Eminye yale miqhudelwano isebenza ngediphozithi. Yingakho siphakamisa ukuthi kuwukuhlakanipha ukufunda yonke imigomo yemidlalo ekuphromoshini.
The OJO Wheel The OJO Wheel I-Play OJO Casino ithanda ukuklomela amalungu azithandela ukudlala nje. Enye yezindlela ikhasino ezwakalisa ukubonga kwayo ngama-Wheel of Fortune amathathu. Ungadlala emasondweni abazikhethele wona, njengoba imiklomelo iya ngokuceba kanye nemali efakiwe. Ufanelele ukudlala isondo lapho uwela umkhawulo othile noma unikezwa isimemo esingahleliwe sokudlala. Futhi, yonke imiklomelo ikhokhelwa njegemali ngaphandle kwemibandela yokubheja. Qiniseka ukuthi uhlale uqaphile izibuyekezo ngokungena ngemvume njalo bese uhlola isigaba Semiklomelo.
OJO Plus OJO Plus I-OJO Plus ingenye yamakhasino e-inthanethi angavamile anika amalungu imali njalo ngazo zonke izikhathi edlala. Ingxenye yediphozithi ngayinye ibuyiselwa kumalungu, ngqo kuma-akhawunti abo ngokheshi, ngaphandle kwezibopho ezihambisana nayo. Futhi kwenzeka ngesikhathi esisheshayo.
OJO Club OJO Club I-Play OJO Casino yenza konke ngendlela ehlukile. Yingakho ingenalo uhlelo lwabadlali abathembekile olusebenza ngamaphoyinti ahambelana nenani yediphozthi. Ikhasino iqaphe umsebenzi wamalungu nokuthandwa kwemidlalo. Amalungu ajwayele ukudlala njalo enziwa ama-A-listers, athola ulwazi ngamaphromoshini akhethekile nezinye izici ezikhethekile. Abadlali ababhekwa njengama-super special iGamers nama-high roller, noma ababhejayo abancane abakwazi ukujabulela amalungelo okudlala, bamukelekile e-Club OJO. Amalungu e-Club OJO noma ama-A-Listers akwelinye inzinga ngokuphelele. Enye yezinzuzo ezinkulu zokuba kule kilabhu ekhethekile wukuthi uthola i-A-Lister Manager ezinikele ekunakekeleni zonke izidingo zakho zokudlala.
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Play Ojo Casino
Iphaneli yokungena ingakwesobunxele kwekhasi lasekhaya lewebhusayithi ye-Play OJO Casino. Uma abadlali befuna ukuvula i-akhawunti ekhasino, wukugcwalisa imininingwane yakho kuphela ngokusebenzisa lezi zinyathelo ezilandelayo:
Vakashela iwebhusayithi ye-Play OJO Casino ngokuchofoza lesi sixhumanisi
Chofoza ‘Join Now’ esigabeni se-log in
Gcwalisa imininingwane elandelayo kufomu elivelayo:
Chofoza noma theha ‘continue’
Gcwalisa imininingwane elandelayo kufomu elivelayo lesibili
Inombolo yeselula enekhodi yezwe
Esigabeni sesithathu faka igama lomsebenzisi, iphasiwedi kanye ne-dolobha lokuzalwa
Khetha umbuzo oyimfihlo bese unikeza impendulo
Chofoza ‘Yes’ noma ‘No’ ukuhlela umkhawulo wediphozithi
Thikha ibhokisi ukuvumelana nemigomo nemibandela bese uqinisekisa iminyaka yakho
Chofoza ‘Go Play’
Manje uzohanjiswa ku-dashboard yakho yangasese
Lesi singaba yisikhathi esifanele sokuthatha i-‘Welcome Tour’
Yebo, kulula kanjalo. Manje usukhululekile ukwenza idiphozithi yakho yokuqala bese uqoqa ama-spin akho Ebhonasi Yokukwamukela.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Play Ojo Casino
Ilabhulali yemidlalo ingenye yezici ze-Play OJO Casino ezijabulisa kakhulu. Isebenzisa abakhiqizi besofthiwe ye-iGaming abangaphezu kwamashumi amabili abahamba phambili emhlabeni njenge-Microgaming, i-Evolution, i-NetEnt, i-SkillOnNet, i-Play’N Go, i-WMS Gaming, i-Elk Studios, ne-Pragmaitic Play, njll. Umphumela walokhu yilabulali yemidlalo enemidlalo engaphezu kwengu-3,000 kuzo zonke izigaba, kubandakanya ama-slot akudala nawevidiyo, imidlalo yamakhadi, i-roulette, i-poker yevidiyo, ne-casino ebukhoma. Kukhona ama-jackpot akhula njalo (progressive) angaphezu kwangu-40 ezigabeni eziningi zemidlalo.
Nakuba yonke imidlalo ingatholakali kuzo zonke izingxenye zomhlaba, izinombolo ezimangazayo ziyaqinisekisa ukuthi zifaka phakathi amalungu avela kuwo wonke amazwe amukelwa yikhasino. Ukwehluka kwabahlinzeki bemidlalo nakho kuqinisekisa ukuthi akukho ukuswela kwemidlalo edume esifunda. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubadlali abavela eNingizimu Afrika. Iningi labahlinzeki besofthiwe bagxile kuma-slot, amagama afana ne-Microgaming, i-NetEnt nabanye futhi banohlu oluphoqayo lwemidlalo yasetafuleni, i-poker yevidiyo njll. I-Evolution ibusa isigaba semidlalo ebukhoma.
Abathandi bama-slots abavela kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba yibona abazuza kakhulu e-Play OJO Casino. Ilabhulali igcwele izinhlobo zama-reels akudala nama-slots evidiyo. Kepha, abadlali bemidlalo yendabuko banezinhlobonhlobo zezihloko zemidlalo abangakhetha kuzo. Ilabhulali yemidlalo yehlukaniswe yaba imidlalo emisha, imidlalo ethandwayo, izincomo ze-OJO, ne-jackpot yansuku zonke. Amalungu angasesha imidlalo yawo ayithandayo ngokusebenzisa izihlungi eziningana.
I-Play OJO Casino inemidlalo yama-slot eminingi. Ibandakanya ama-slot e-3-reel akudala kanye nama-slots evidiyo ama-reel amaningi anezindikimba ezithokozisayo ezivela ezinganekwaneni, amasiko e-oriental, uhambo lokuzijabulisa, ubugebengu, nama-movie athandwayo nemibukiso ye-TV, njll. Kukhona ama-slot azo zonke izintandokazi. Amalungu abadlala izihloko abazithandayo, labo abathanda ukudlala izindikimba abazithandayo, nabadlali abakhetha ngokungahleliwe bonke bangathola injabulo yabo yokudlala ama-slot e-Play OJO Casino.
Nazi ezinye zezihloko ezaziwa kakhulu ekhasino: i-Vikings, i-Thunderstruck II, i-Rich Wilde and the Book of Dead, i-Asgardian Stone, i-Immortal Romance, ne-Golden Mane, ngaphandle kwamakhulu amanye.
I-lobby yemidlalo yamakhadi e-Play OJO iyinhlanganisela yemidlalo yamakhadi ebukhoma nemidlalo yamakhadi edijithali, kubusa eyokuqala. Nakuba kukhona i-lobby elukile ye-blackjack nesigaba semidlalo ebukhoma. Iningi lemidlalo yamakhadi e-lobby ayizinhlobo ezehlukile ze-blackjack ebukhoma. Eminye imidlalo yamakhadi edijithali e-lobby yi-Baccarat, ezinye izinhlobo ze-poker, ne-Punto Banco.
Imidlalo yamakhadi neye-roulette ivame ukufakwa e-lobby yemidlalo yasetafuleni kumakhasino e-inthanethi anamuhla. I-Play OJO Casino inquma ukunika ukubaluleka okulinganayo kuzo zombili izigaba. I-lobby ye-roulette ibandakanya izinhlobo zaseYurophu zobuzwe obuhlukile kanye ne-American Roulette Pro. Lesi sigaba sinemidlalo ehleliwe eminingi ye-roulette ebukhoma enemikhawulo yokubheja ephakathi kuka-R1 no-R 32,000.
Nakuba isigaba se-poker yevidiyo e-21Dukes singesikhulu njengezinye izigaba zemidlalo, sinazo zonke izihloko ezidumile nezibalulekile njenge-Jacks or Better, i-Aces and Faces, i-Deuces Wild, ne-Joker Poker, ngaphandle kwezinye. Imidlalo ye-poker yevidiyo e-21Dukes ibuya nezinhlobo zezandla ezingu-3, izandla ezingu-10, nezandla ezingu-25.
Isigaba sekhasino ebukhoma sinemidlalo ebukhoma engaphezu kwengu-60. Kodwa-ke, izinhlobo eziningi ziyahluka kuphela ezinombolweni zamatafula, amazinga okubheja, nezilimi. Lokhu kuseyi-lobby yekhasino ebukhoma enkulu futhi ehlukahlukene kunalokho okubonwa kumakhasino aphezulu kakhulu. Umkhawulo ophansi wokubheja imidlalo yamakhadi ngu-R1 futhi ikhuphukela phezulu kumkhawulo ophezulu ongu-R212,000. Iningi lemidlalo ebukhoma ngeye-Evolution kanye neminye ebalulekile evela ku-NetEnt, ne-Pragmatic Play, njll.
Ezinye zezihloko zemidlalo ebukhoma ezithandwayo e-lobby ye-Play OJO yi-Roulette, i-Blackjack, i-AutoRoulette, i-French Roulette, i-Platinum Live Casino, i-Common Draw Blackjack, i-Italian Blackjack, i-Casino Hold’em, i-High Limit Auto Roulette, i-Golden Ball Game Show Edition, i-Baccarat, i-Super 6, nokuningi.
Ama-jackpot Akhula Njalo (Progressive)
I-Play OJO Casino inemidlalo eminingi ye-jackpot evuselelwa njalo ngemuva kwamahora angu-24. Lawa ama-jackpot ansuku zonke, abiza inani esilinganiselwa ku-R 10,000 ngosuku. Kodwa-ke, ezimweni eziningi iqoqo lemiklomelo lingakhuphukela ku-R 300,000 nangaphezulu! Ama-jackpot ansuku zonke abandakanya amagama anjenge-Dynamite Riches, i-Atlantis, AzI-tec Spins, i- Dragon’s Fire Megaways, ne-Vault of Anubis, njll.
Kepha lawa akuwona ama-jackpot acebe kakhulu oke wezwa ngawo. I-progressive jackpot yangempela itholakala ezihlokweni zama-progressives ezigidi eziningi ezifana ne-Mega Moolah Isis, i-The Goonies, i-Major Millions, i-King Kong Cash, i-Hall of Gods, i-Mighty Griffin Megaways, njll.
Ingabe i-Play Ojo Casino Iyatholakala Yini Kuselula?
Ungaphatha i-Play OJO esikhwameni sakho nomaphi lapho uya khona futhi ujabulele isipiliyoni sokugembula esingenazinkinga. Ikhasino inepulatifomu yeselula elungiselelwe ehambisana nenqwaba yama-smartphones nama-tablet. Ulungele ukudlala uma:
Usebenzisa i-smartphone noma i-tablet esekela iziphequluli zesimanje ezifana ne-Chrome ne-Safari
Unokuxhumana kwe-inthanethi okuzinzile ngaso sonke isikhathi (sebenzisa i-4G noma i-Wi-Fi ukuthola isipiliyoni sokudlala esingcono)
Idivayisi yakho yeselula ithola izinhlelo ezibuyekeziwe zokuphepha njalo nokuqina ku-inthanethi
I-Play OJO iyatholakala kuwo wonke ama-tablet namaselula e-Android. Ama-smartphone angabizi avela kwa-Samsung, kwa-Huawei, nakwa-Moto, njll anganikeza isipiliyoni sokudlala esanelisa ngokweqile kusuka nomaphi lapho ukhetha ukudlala khona, futhi nganoma yisiphi isikhathi ozikhethele sona.
Ngingayidawuniloda Yini i-Play OJO Casino Kuselula Yami?
Ipulatifomu ye-Play OJO Casino ayifaki noma iyiphi i-app. Izindawo zamanje zokudlala azisahlinzeki ngama-app asebenza engaxhunyiwe ku-inthanethi ngoba abadlali bakuthola kulula ukudlala ku-inthanethi ngeziphequluli. Vele uye kuwebhusayithi yekhasino, faka imininingwane yakho yokungena ngemvume, bese uqala ukudlala.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Play OJO Casino
Wire Transfer Izinsuku -7
Visa/Master card Izinsuku 4-7
PayPal Izinsuku 1-2
Skrill Izinsuku 1-3
Paysafecard Izinsuku 1-3
Fast Bank Transfer Ngokusheshayo
Direct eBanking Izinsuku 1-3
Citadel Banking Izinsuku 1-4
Solo/Switch Izinsuku 1-4
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha Imali e-Play OJO
Visa/ Master Card Yebo
Fast Bank Transfer Yebo
Direct eBanking Yebo
Citadel Banking Yebo
Ilayisense: Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission Ingxoxo Ebukhoma: Yebo
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: https://www.playojo.com/en/
Ubuhle Nobubi be-Play Ojo Casino
Yini Eyenza Ukuthi I-Play Ojo Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
I-Play OJO iyinkampane yokudlala ku-inthanethi emhlabeni wonke yase-UK, enedumela, esezingeni eliphezulu, enezinzuzo eziningana zabadlali emhlabeni jikelele. Kodwa-ke, ikhasino iyizindaba ezimnandi ikakhulukazi kubadlali baseNingizimu Afrika ngenxa yalokhu okulandelayo:
Iyabamukela abadlali abavela e-Rainbow Nation
Wonke amaphromoshini ayatholakala kumalungu aseNingizimu Afrika
I-SA Rand ingenye yemali ikhasino esebenza ngayo
Ilabhulali yemidlalo enkulu enenqwaba yezihloko ezitholakala eNingizimu Afrika
Maqondana nemidlalo, i-Play OJO Casino inenye yamalabhulali amakhulu ukwedlula amanye. Injini enamandla yabahlinzeki bemidlalo abahamba phambili emhlabeni abanjenge-Microgaming, i-NetEnt, i-Evolution, i-Play’N Go, i-Yggdrasil, i-Elk Studios nabanye abahlinzeki besofthiwe abangu-20 inika ilabhulali yekhasino amandla ngemidlalo engaphezu kwengu-3000+.
Ikhathalogi yemidlalo ifaka zonke izigaba zemidlalo yasekhasino ezifana nama-slots akudala nawevidiyo, imidlalo yamakhadi, i-roulette, i-poker yevidiyo, nemidlalo ebukhoma, njll. Ikhasino ibuye ibe nenqwaba enkulukazi yama-jackpot emidlalweni yama-slot neyasetafuleni.
Ngaphandle kweBhonasi Yokukwamukela enomusa, i-Play OJO Casino inikeza amaphromoshini ayimfihlakalo nsuku zonke, afakwe ilebula ‘kickers’. Kukhona ama ‘kicker’ nsuku zonke ngakho amalungu adinga ukuzigcina enolwazi ngokubheka nsuku zonke ekhasini lamaphromoshini noma ngokubhalisela izaziso ze-imeyili zekhasino. Ngaphezu kwalokho, ikhasino iqhuba imiqhudelwano yama-slot nsuku zonke.
I-Play OJO Casino iyaphana kakhulu uma kukhulunywa ngokuklomela abathembekile. Uhlelo lwabadlali abathembekile luphendulela ama-spin ajwayelekile e-Wheel of Fortune abe imiklomelo yemali yabadlali abavamile, abangaba ama ‘A-listers’ e-Club OJO ekhethekile ngokuhamba kwesikhathi. Futhi, sicishe sakhohlwa; le khasino inezindlela zokubhenka ezinhle kakhulu futhi iyamukela, iphinde ikhokhele, nge-SA Rand.
Izikhalo nge-Play Ojo Casino Ningizimu Afrika
I-Play OJO Casino ilawulwa yiziphathimandla ezimbili ezinamandla kunazo zonke emhlabeni, iMalta Gaming Authority ne-UK Gambling Commission. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi ikhasino igcina amalungu ayo anelisekile nokuvimbela izikhalo. Asikaboni zinkinga ezinkulu nge-Play OJO. Kodwa-ke, isimo singashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Ungaqiniseka ukuthi sizobuyekeza lesi sigaba noma nini lokho kwenzeka.
Ingabe i-Play OJO Casino Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Imithetho yaseNingizimu Afrika ayiwavumeli amakhasino e-inthanethi ukuthi asebenze ngaphakathi kwemingcele yezwe. Nokho, iziphathimandla zingenza okuncane ukuvimbela izakhamuzi zayo eziku-inthanethi ukudlala emakhasino e-inthanethi asebenza emazweni angaphesheya.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-Play OJO Casino?
Amalungu kufanele enze isicelo sokukhipha imali esigabeni se ‘Cashier’ noma se ‘ Banking’ sekhasino bese enza okulandelayo:
Qinisekisa ukuthi unebhalansi esele ku-akhawunti yakho
Bheka isimo sebhonasi yakho ukuqinisekisa ukuthi azikho izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ezisalindile.
Yenza isicelo sokukhipha imali ngemuva kwalezi zinyathelo ezimbili ezingenhla kuphela, ngaphandle kwalokho ikhasino ingasenqaba isicelo.
Khetha ‘Withdrawals’ engxenyeni yokubhenka / kakheshiya, faka inani, bese ukhetha indlela yakho yokukhokhelwa
I-Play OJO Casino ingacela ukuqinisekiswa kobunikazi ngaphambi kokucubungula isicelo sakho sokukhipha imali. Lokhu kungokwezidingo ze-KYC zabaphathi bamalayisense. Ukwehluleka ukuhlinzeka ngamadokhumenti kuzobangela ukukhanselwa kwesicelo sakho sokukhipha imali.
Yini i-Play OJO Casino?
I-Play OJO Casino iyinkampane yokudlala ku-inthanethi, eyamukela abadlali abavela emazweni amaningi emhlabeni wonke, abandakanya iNingizimu Afrika. Ikhasino isebenzela e-Malta futhi inelayisense ye-Malta Gaming Authority neye-UK Gambling Commission
Amalungu angadlala amakhulu emidlalo kuzo zonke izigaba zekhasino futhi athole izinkokhelo ngezimali ezahlukahlukene ezisekelwa yikhasino. I-Play OJO ingadlalwa ku-inthanethi kuma-PC nakumadivayisi aphathekayo.
Ngubani umnikazi we-Play OJO Casino?
I-Play OJO Casino iyipulatifomu esethsenziswa abaningi (white label) yekhasino ephethwe yi-SkillOnNet, ebhaliswe e-Malta kuleli kheli elilandelayo: Office 1/5297 Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta ‘Xbiex, XBX 1120, Malta
Ingabe i-Play OJO Casino inezici zokubhejela ezemidlalo?
I-Play OJO Casino yikhasino ye-inthanethi, engenayo i-sportsbook. Kepha, ikhasino inenani elikhulu lemidlalo ehlobene nezemidlalo.
Iphephe kangakanani i-Play OJO Casino?
Ukuphepha kwe-Play OJO kungahlolwa ngalokhu okulandelayo:
Inelayisense ye-Malta Gaming Authority ne-UK Gambling Commission
U-opharetha yinkampane ye-iGaming eyaziwayo nethenjwayo
Ikhasino inikeza imidlalo evela kubahlinzeki bemidlalo abathembekile kuphela abanjenge-Microgaming, i-NetEnt, nabanye
Ikhasino inezinqubo eziqinile zokuqinisekisa ukugembula okulungile nokunomkhawulo
Idatha yomdlali ivikelwe ngobuchwepheshe obuthuthukile be-SSL
Ikhasino inikeza izindlela zokubhenka eziphephile kuphela